Alarobia, Martsa 31, 2021 Alarobia, Martsa 31, 2021 Douglas Karr
Momba ny CodePen
Miaraka amin'ny CodePen, afaka nanao ny asa rehetra nilaina aho mamoaka ny kajy Niditra tao amin'ilay tranonkala aho. Ny ankamaroan'ny zavaboary amin'ny CodePen dia loharanom-baovao ho an'ny daholobe. Izy ireo dia zava-manan'aina izay azon'ny olon-kafa sy ny fiaraha-monina iaraha-miasa, avy amin'ny fo tsotra, hatramin'ny famelana hevitra, hatramin'ny fikolokoloana sy fanovana ho an'ny zavatra ilain'izy ireo manokana.
Miaraka amin'ny CodePen, azonao atao ny manova ny fomba fijerinao raha tianao ho eo ankavia, eo ankavanana, na eo ambany ny takelaka eo am-piasana… na zahao ny HTML ao anaty kiheba vaovao. Ny fomba fijerin'ny lafiny iray dia tena mandaitra mba hizaha toetra ny toe-javatra misy anao satria azonao atao ny manamboatra ny haben'ny pane azo jerena.
Azonao atao ny mandamina ny script-nao tsirairay ho Pens, manambatra azy ireo ho Projects (multi-file editor), na koa manangana fanangonana. Izy io dia tranokala portfolio miasa ho an'ny kaody front-end izay ahafahanao manaraka ny mpanoratra hafa, mandoka tetikasa hafa nozarain'ny besinimaro ho anao manokana, ary mianatra koa ny fomba fanaovana zavatra mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fanamby.
Azonao atao ny mitahiry toy ny GitHub Gist, manondrana amin'ny rakitra zip, ary na dia EMBED ny penina amin'ny lahatsoratra toy izao:
Jereo ny Pen
Vokatry ny varotra mialoha amin'ny hevitra amin'ny Internet by Douglas Karr (@douglaskarr)
Mamporisika anao hisoratra anarana aho. Hosoratana anarana amin'ny mailaka fanaon'izy ireo isan-kerinandro ary azonao atao koa ny mampiditra ny fahana amin'ny fahana RSS anao hahafahanao mahita penina vao navoaka. Ary, raha manomboka mitady na mizaha ireo penina ho an'ny besinimaro any ianao, dia hahita tetikasa tsy mampino… manan-talenta ireo mpampiasa!
Araho Douglas Karr amin'ny Codepen
Ny kinova aloa, CodePen Pro, dia manolotra fiasa fanampiny an-taonina ho an'ny fanatsarana ny fampiasa na ekipa - ao anatin'izany ny fiaraha-miasa, ny fizotrany, ny fampiantranoana ny fananana, ny fomba fijery manokana, ary na ny tetikasa naparitakao miaraka amin'ny fonenanao manokana aza. Ary, mazava ho azy, ny CodePen dia manome tahiry lehibe miaraka amina fampidirana Github ahafahan'ny ekipanao iray miasa. Raha te hizaha kaody tsotra toa ahy ianao, ny CodePen dia fitaovana sarobidy.